न्यायाधीस बन्ने सपना पालेका क्रिश्चलको समाजसेवा स्थानीय बालकल्याण विद्या मन्दिरमा अध्ययन गरेका क्रिश्चल आफ्ना साथीहरुका लागि पनि रोलमोडल हुन् । हाम्रो अभियान टिमका मुख्य खम्बा बनेर समाजसेवामा होमिएका उनी आगामी दिनमा यसको क्षेत्र बढाएर मानिसहरुलाई सहयोगी बन्न सिकाउँने प्रयासमा छन् । बिहिवार, बैशाख २३, २०७८
सेलिब्रेटीकी सेलिब्रेटी शुष्मा महरा काठमाडौँमा दुई दशकयता फेसियल हाउस चलाइरहेकी शुष्मा महराका लागि भने यो काम हिजोआज सामान्य हो । राजधानीको मुटु मानिने काठमाडौँ मलको चौथो तलामा फेसियल हाउस खोलेर राज गरिरहेकी शुष्मा सेलिब्रेटीकी पनि सेलिब्रेटी हुन् । आइतवार, बैशाख १२, २०७८
विश्वकै उत्कृष्ट ५ महिलामा नेपालकी रुना झा विश्वव्यापी कोरोना भाइरससँगको लडाईमा अग्रमोर्चामा रहेर भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै नेपाली रुना झा संयुक्त राष्ट्र संघको उत्कृष्ट पाँच महिलामा पर्न सफल भएकी छन । सयुक्त राष्ट्रसंघको यूएन वुमेनले सार्वजनिक गरेको सुचीमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको निर्देशक डा रुना झा पनि परेकी हुन । शनिवार, बैशाख २०, २०७७
प्रदीप परियार : 'डुम'बाट 'योङ ग्लोबल लिडर' ! उनले पचासाैँ देश घुमिसके । विश्वमा कहीँ न कहीँ छुवाछुत देख्छन् । तर, दक्षिण एसियामा अन्य देशको तुलनामा बढी छुवाछुत भेटे, उनले । भन्छन्, ‘जातको आधारमा हुने विभेद दक्षिण एसियामा बढी छ । मानिस आफू मात्रै पुग्दैनन्, पुरातन सोच र संस्कृति सँगै लिएर जान्छन् ।’ आइतवार, चैत्र २, २०७६
भाँडा माझ्ने डाइक यसरी बने सर्वोत्कृष्ट फुटबलर कुनै बेला होटलमा भाँडा माझ्दै कमाइको बाटो गरेका भ्यान डाइकले सोचेका पनि थिएनन्, उनको फुटबल कला यसरी फैलनेछ। उनीसँगै विलियम फुटबल क्लबमा रहेका साथीहरु र प्रशिक्षकले समेत भ्यान डाइकको यो उचाइ सोचेका थिएनन्। शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
फुटबल, विवाद र म्यारोडोना ! म्यारोडोनालाई अहिले पनि सम्झिने केही कारण छन भने ती विवाद हुन । उनले आफ्नो विगत जति स्वर्णिम बनाएका छन । त्यो विगत झस्काइरहन फेरि विवाद शुरु गर्छन र आफ्नो लिगेसी जबर्जस्त रुपमा फुटबल पारखीको दिमागमा घुसाउँछन । साच्ची भन्ने हो भने रिसाहा, सन्की र विवादित नबनुन त म्यारोडोना, म्यारोडोना रहदैन थिए । पेले भइसक्थे । शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
क्रिकेटका 'दादा'देखि 'बिसिसिआई'का अध्यक्षसम्म ! गांगुली यस्ता कप्तान हुन्, जसले विदेशी भुमिमा भारतलाई जित्न सिकाएका थिए। यही सानका कारण उनलाई दादा भन्न थालिएको हो। टिम इन्डियाका यी कप्तानले कुनै समय विश्व क्रिकेटमै दादागिरी देखाएको मानिन्छ। शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
सी चिनफिङ : जो किसान थिए, चीनका राष्ट्रपति बने माक्र्स र लेलिनको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएका माओले चीनलाई आजको नयाँ संसार बनाए । माक्र्स, लेलिन र माओको सिद्धान्तलाई आजको प्रविधि युगमा सबैभन्दा धेरै उत्कृर्षमा पुर्याउने नाम हो, सी जिनपिंग । चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सीले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई उछिनिसकेका छन भने विकास र समृद्धिका नयाँ नयाँ मोडल प्रस्तुत गरेर विश्वलाई नै चकित तुल्याएका छन । शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६